Abafana abafuna ukuhlala ... - Geofumed
Abafana abafuna ukuhlala ...
Ngo-Okthobha, 2009 egeomates My, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
phezolo nelungelo ukumenywa emtshatweni, nto leyo eye wandishiya i isongo inkalakahla umdla, kule mihla ukuba uqikelelo zithe zadala (ukuba sinika ithuba) i owona mnikelo ke ukhetho ukukhetha isixhobo nciphisa i imvini.
Babengamakhwenkwe amabini, kodwa ngoku awanjalo kodwa ngendlela endingazazi ngayo (ndiyacinga ngabo) kunye nesimemo sabo kubonakala ngathi baqhubeka beqwalaselwa ngale ndlela. Unomhle kakhulu, umfundi wezoBunjineli boLuntu, umfundi kwelinye iikhosi ze-AutoCAD, enye yezona zinto zibalaseleyo kwiNtengiso, ngeli xesha wayefunda uLawulo lwezoRhwebo. Kwesinye sezidanga baba ziintombi, ndiyakhumbula ukuba amehlo abo akhanye njani ngaloo ntambama xa bevela kumagumbi ahlukeneyo basebenzisa i-Yahoo isithunywa. Epa! loo minyaka embalwa edlulileyo.
Umtshato lwenzeka ngaphandle wafuna kakhulu, elula, kunye enchape yamaYuda, isimbo yaye kubonakala ukonwabela incasa efanayo. okuvota wabonisa ukuba kukho abantu abafuna ukwenza izinto zobu bomi, enethemba ngaphakathi. Kungekudala balanda sokubuya eye kokuba ebekwe yi ntlekele lwentando yesininzi, waba ephemeris kubaluleke ngakumbi ukuba ikhalenda, yiva endikuthethayo yaphakanyiswa lo guy ngokuchasene esitoreni amatye kuyo ingcwele undiqondisile elula iintliziyo zabo yaye ukuvuyela ukwenza into eyiyo kungekhona nje ukuba phambi kwezihlobo zabo.
Ekugqibeleni, Ndincedise ngezipho zabo zomtshato ukuba ayifiki abonela emva kwilori yam, ngoko ndandisazi ukuba indlu encinane apho bethemba ukuqalisa. Andizange kungena kwigumbi kodwa egumbini elincinane ndandibona ibhodi umzobo wasebenzisa intombi nokulwa chinógrafo kwikholeji, ikhompyutha unobuchule olugqibeleleyo uLizo kuye, ezi kunye nezinye encinane kwandiphazamisa memory wenza 12 imithombo .
Emva kwayo yonke le minyaka, phakathi iinkolelo elwayo umhlobo wam Gijon wena awufuni ukwazi ilokhwe yomtshato kunye nomhlobo wam yase abaza kubanika nantoni atshate kuqala, okoko nje uthando Njengokuba uluhlu yayo; sibona esi siqendu ebusuku si khumbuze ukuba
kufuneka kugcinwe ubomi obulula, ngaphandle kokulahlekelwa ingqondo yakho kufuneka bakwazi lula 15 kwiminyaka elide, ukuze uluhlu lokubhaliweyo isiphumlisi-bahlukana, engaquki iintsika yobalo obuluqilima kunye booleans, kodwa zisekelwe iibhokisi drop-phantsi elula, leyo njengoko iimeko esiphezulu baye akukho ziqwempu ezinkulu 15 imizuzu, kuquka ikholam ayibabandakanyi ebezingalindelekanga kunye nolonwabo nje elo gama.
Ngoku andisisebenzisanga i-Yahoo Messenger, ayenjalo, andazi nama-imeyili abo okanye abasebenzisi be-Skype. Ukudibana nam, bayenza ngokwabo. Ewe, ixesha lidlulile, kodwa ndibona emehlweni abo ukukhanya okufanayo kwaso ngaloo mva.
Andilindele ukuba benze kakuhle, ndiyazi oko baya kuhamba kakuhle. Ubomi basithathile ngeendlela ezahlukeneyo, ngoku abayizi i-geofumo ekungabonakali kwale ndawo, kodwa ndicinga ukuba akudingeki ukuba bafunde le post, into endiyithethayo apha sele uyazi.
Post edlulileyo«Edlulileyo Isixhobo sewebhu seGeneric ukupapashwa kwegraphic cartography
Post Next I-Microstation: Yenza imiyalelo kwibhodibhodiOkulandelayo "
Enye impendulo "Abafana abafuna ukuhlala ..."
Ndiyifumana i-intersante ukusuka kwi-geofumado shaance, ungakwazi ukuyiqonda. Le sithuba i-akhawunti yile.
Ndiyayixabisa, oku kunye nazo zonke izithuba ozishiya kwiblogi yakho.